दैलेखमा क्‍वारेन्टाइनमा बसेका एक जनाको मुत्यु – जुगल टाईम्स
दैलेखमा क्‍वारेन्टाइनमा बसेका एक जनाको मुत्यु भएको छ। मुत्यु हुनेमा १० दिनअगाडि भारतबाट आएर क्‍वारेन्टाइनमा बस्दै आएका दुल्लु नगरपालिका-११ का ४० वर्षीय पुरुष रहेका छन्।
भारतबाट नगरपालिकाले उद्धार गरि ल्याएका उनी नगरपालिकाले बनाएको क्‍वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थिए। क्‍वारेन्टाइनमा बेहोस भएपछि क्‍वारेन्टाइनमै उपचार गरिएको थियो।
उनको क्‍वारेन्टाइनमै उपचारका क्रममा शनिवार बिहान १० बजे मुत्यु भएको दुल्लु अस्पतालका प्रमुख डा. पूजा बिसीले बताइन्। मुत्यु भएका उनको कोरोना परीक्षणका लागि तिन दिनअगाडि स्वाब कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रठिष्टान जुम्लामा पठाइएको छ। तर अझै रिर्पोट आउँन बाँकी रहेको डा. बिसीले बताइन्।
एकातिर कोरोनाको सन्त्रास, अर्काेतिर भाइरल ज्वरो
Posted on १ बैशाख २०७७, सोमबार १६:१४ Author जुगल टाईम्स
प्युठान अस्पताल बिजुवारमा मौसममा भएको परिवर्तनसँंगै भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्दै छन् । अस्पतालमा उच्च ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनका समयमा भाइरल ज्वरोका बिरामीसमेत अस्पताल आउने गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी राजन घिमिरेले बताए । मौसम परिवर्तन, दूषित पानी र खानपिनमा सतर्कता नअपनाउँदा भाइरल ज्वरोका […]
Posted on ८ बैशाख २०७७, सोमबार १५:२५ Author जुगल टाईम्स
कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले पहल गर्ने भएको छ। कोभिड–१९ का कारण मुख्यतः खाडीमा श्रम गरिरहेका केही नेपाली बिचिल्लीमा परेको र यही अवस्था जारी रहे थुप्रै नेपाली अप्ठ्यारोमा पर्ने भन्दै सङ्घले स्वदेश फर्काउने रणनीति तय गर्न लागेको हो। सङ्घले गठन गरेको ‘कोभिड–१९ उच्चस्तरीय समिति’को बैठकमा […]
गुणस्तरहीन स्यानिटाइजर बजारमा, औषधि व्यवस्था विभागको चासो
Posted on २७ चैत्र २०७६, बिहीबार ००:१० Author जुगल टाईम्स
२६ चैत, काठमाडौं । बजारमा गुणस्तरहीन स्यानिटाइजर प्रयोग भएको पाएपछि औषधि व्यवस्था विभागले त्यसमा चासो व्यक्त गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको बेलामा बजारमा गुणस्तरहीन स्यानिटाइजरको प्रयोग बढेको भन्दै बुधबार सूचना जारी गर्दै विभागले चासो व्यक्त गरेको हो । बजारमा बिक्री भइरहेको ह्याण्ड स्यानिटाइजरमा विभागले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको विभागले जारी गरेको सूचनामा […]